Umkhankaso wokwakha isizukulwane esisha sabadlali - Bayede News
Umkhankaso wokwakha isizukulwane esisha sabadlali
Ubona kuzofezeka iphupho lakhe leminyaka uTim Sukazi ngokuthi kukhiqizeke ummeli obengumdlali abephethe izindaba zakhe njengemeneja. USukazi, ongumnikazi wenkampani iTim Sukazi Incorporated esungulwe ngowezi-2013 nezinze eSandton eGoli, uzakhele igama ngokuphatha izindaba zabadlali bakanobhutshuzwayo abagijime emaqenjini amakhulu kuleli, phesheya kwezilwandle naseqenjini lesizwe iBafana Bafana. Kuleli ningi abeliphethe nguKatlego “Mahoota” Mashego eQuality Talent Sports (QTS) kuphela oqome ukusika iphethini ngokuhamba ezinyathelweni zikaSukazi. UMashego, owayengumgadli ongalibheki ipali esekuHellenic, iPlatinum Stars, iSuperSport United, i-Orlando Pirates, iMoroka Swallows, iGolden Arrows, iChippa United neMamelodi Sundowns, usezophothula izifundo zeBachelor of Law (LLB) azenza e-University of South Africa (Unisa).
Kule minyaka esondela kwengama-20 esebholeni, ushiye esezuze okuningi njengoba ebizelwe kuBafana Bafana amahlandla angama-22 washaya amagoli amabili. Wanqoba isicoco seligi neSuperSport ngowezi-2008 nePirates ngowezi-2011. Wakhala wemuka nomklomelo wokushaya amagoli amaningi ehlohla ali- 13 esemabhukwini eSwallows. Ngokusho kukaSukazi, ohluleka ukuzibamba injabulo uma ekhuluma ngalolu daba, uMashego uqale ukugxila ezincwadini ngesikhathi eseyophuma ngesango kuSundowns. Uthi ubudlelwano bakhe nalo mdlali waseBushbuckridge, esifundazweni iMpumalanga, baqala esagijima kuHellenic ngowezi-2003. “Mina ngaleso sikhathi ngangingakaqedi ukufundela ubumeli ngiseCape Town. Ngangifuna ukuzama inhlanhla kuyona iHellenic noma i-Ajax Cape Town. Ngicabanga ukuthi kukhona akubukile kimi okuhle sengikhula emsebenzini wami ngiphethe izindaba zakhe nezozakwabo.
Ukumbona eseseduze ukuphothula izifundo zakhe kuzongijabulisa kakhulu kwazise bekuyiphupho lami ukukhiqiza ummeli. Ngifuna uphele kubantu bakithi lo mqondo wokuthi abadlali bebhola abayithandi imfundo. Kuningi okuzoguquka ngalokhu okuzozuzwa uKatlego,” kusho uSukazi. Ukuphumelela kukaMashego kuzochaza ukuthi cishe wonke amaphupho uSukazi anawo afezeka ngokushesha. Ngesikhathi lesi sikhulu sithenga iCape Town All Stars sayishintsha yabizwa ngeTS Galaxy ngowezi-2018, elinye lamaphupho aso kwakuwukulethela abantu bangakubo kwaNdebele, eMpumalanga, into abazozigqaja ngayo. Kungakapheli sikhathi eside iTS Galaxy yazifaka emlandweni inqoba isicoco seNedbank Cup idlula ezimfivilithini iKaizer Chiefs kowamanqamu owawuseMoses Mabhida Stadium ngoNhlaba wonyaka odlule. Ngokunqoba le ndebe iTS Galaxy yamela iNingizimu Afrika kuCaf Confederations Cup nokho yashaywa ukungabi nasipiliyoni kwazise ziningi izingqinamba okubhekwana nazo kulo mqhudelwano. USukazi ubukeka enekhono elihle lokuphatha abadlali abangaphansi kwakhe eQTS ukuze bakwazi ukuhlelela impilo yangaphandle kwebhola.
UDaine Klate, yize eseliyekile ibhola, uziphilela kahle njengoba enenkulisa egada odado kanti ugabe ngeziqu kuFinancial Accounting. UKlate uyeke ebholeni ebambene noHlompo Kekana weSundowns ngokuba yibo bodwa okwamanje abasaphakamise indebe yeligi amahlandla ayisithupha. UKlate wayinqoba kathathu neSuperSport wayithola kabili esekuPirates kanti uyivale kuBidvest Wits. Omunye umdlali okubukeka indlala ezoyizwa ngendaba uma kuphela ngaye ebholeni isitobha seKaizer Chiefs, uKgotso Moleko. Lo mdlali ungubasi epulazini lakhe eliseBloemfontein lapho efuye khona izinkomo, amahhashi, iziklabhu, kanti ulima izithelo nemifino.
Ngaphandle kokuba imeneja yabadlali abanjengo-Eric “Tower” Mathoho weChiefs, u-Elias Pelembe weWits, uVincent Pule, uSiyabonga Mpontshane noXola Mlambo bePirates, uLebo Maboe noThapelo Morena beSundowns, uSukazi useke waphatha izindaba zabaqeqeshi abaphambili. Labo nguMuhsin Ertugral, uManqoba Mngqithi, uDan “Dans” Malesela noSteve Komphela. UMashego uzolandela ezinyathelweni zobedlala naye ukugaba ngeziqu zomthetho. USiboniso “Pa” Gaxa owayeyisitobha seBafana Bafana, iSuperSport, iChiefs neSundowns, wazuza ezePolitical Science and Social Studies eWits University. Njengamanje umatasa uphokophele ukuthola ezeLLB Law kusona futhi lesi sikhungo saseGoli. Ebuzwa ngempumelelo yakhe, uGaxa wabonga ukuhlangana nabantu abanjengoPitso Mosimane noGlyn Binkin empilweni yakhe efika emncane ebholeni.